သင်ဝယ်ယူသူများအနိုင်ရမည့်ထိရောက်သောမိုဘိုင်းကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးအချက်များ ၅ Martech Zone
ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာအသိပညာဗဟုသုတ 52 ရာခိုင်နှုန်းကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝဘ်အသွားအလာ၏စမတ်ဖုန်းမှလာသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးတဲ့လူ ဦး ရေဟာတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာတယ်။ လူအများစုသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောမိုဘိုင်းဝဘ်ဆိုက်မပါဘဲအခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးတွင်ဥပမာ၊ စားသုံးသူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကဝယ်ယူခဲ့သည် သူတို့လက်ကိုင်ဖုန်းကတဆင့်ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ။
ထွက်မသွားပါနဲ့! သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ထိရောက်သောမိုဘိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သောအချက် ၅ ချက်ပါ။
၁။ မိုဘိုင်းကွန်ရက်ဆိုက်တင်ခြင်းမြန်နှုန်းသည်သင်၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်သည်
တကယ်တော့, သုတေသနပြပွဲ ၅ စက္ကန့်သို့မဟုတ်ပိုမြန်သောမိုဘိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်နှေးကွေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောရောင်းအားကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ကနှေးနှေးမြန်နှုန်းကိုသည်းမခံပါ။ သင်၏မိုဘိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်ကျိန်စာဖြစ်သည်။
add-ons တွေကိုလျှော့ချပါ သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းပေါ်မှာ။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိဆာဗာတောင်းဆိုမှုအရေအတွက်သည်၎င်း၏အမြန်နှုန်းကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်နိုင်သည်။ သငျသညျမျိုးစုံ tracker သို့မဟုတ်သရုပ်ခွဲ tools တွေကိုအသုံးပြုနေပါသလား? သင့်ရဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းသင်အဲဒီမှာပြfindနာကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ထိပ်ကိုအောက်ခြေအထိဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ ရောဂါအမည်ဖေါ်ခြင်း။ အချို့သောဖိုင်များသည်သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုဖျက်ဆီးနေသည်။ အမြင်အာရုံပါအကြောင်းအရာများကဲ့သို့သောကြီးမားသောဖိုင်များသည်သင်၏ဝန်နှုန်းကိုသိသိသာသာနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ဒါဆိုသင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသင်၏ဖိုင်များကိုလျှော့ချချင်ပေလိမ့်မည်။ ပုံများ၊ ကြော်ငြာနည်းပညာနှင့်ဖောင့်နံပါတ်များသည်ဤတွင်ပုံမှန်အတိုင်းကျူးလွန်သူများဖြစ်သည်။
အကြောင်းကိုလေ့လာပါ အကြောင်းအရာ ကြောင်း ဦး စားပေးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာရှိအခြားဒြပ်စင်တစ်ခုမတိုင်မီ ဦး စွာတင်သင့်သည့်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ထားပါ။ ဒီမဟာဗျူဟာသည်ဆိုက်၏သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေစဉ်သင်၏ဝန်မြန်နှုန်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
၂။ Mobile Ready ဖြစ်ရန် Responsive Design ကိုရွေးချယ်ပါ
တုံ့ပြန်မှုရှိသောမိုဘိုင်းဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်ခဲယဉ်းသည်။ မတူညီသောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ချိန်ညှိရန်လိုသည်။ ဒါပေမယ့်ရှာပုံတော်အဲဒီမှာရပ်တန့်မထားဘူး အခြားဖုန်းမျက်နှာပြင်နဲ့ပလက်ဖောင်းကိုလည်းသင်စဉ်းစားရမယ်။
သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသွားလာရန်အတွက်ခလုတ်များကိုသင်အာရုံစိုက်နိုင်သည်။ မီနူးများသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများကိုနှိပ်ရန်လွယ်ကူသင့်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီသည်အသုံးပြုသူအားပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှည်းထဲသို့ထည့်ခြင်း၊ တောင်းဆိုမှုများကိုပယ်ဖျက်ခြင်း (သို့) အမိန့်များကိုစစ်ဆေးခြင်းစသည့်အရာတစ်ခုကိုပြီးမြောက်လိုသည့်အခါမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာသဲလွန်စပေးသင့်သည်။
ဒီဇိုင်း၏အပြင်အဆင်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းတွင် resolution၊ scripting စွမ်းရည်များ၊ သတိရပါမိုဘိုင်းဖြေရှင်းနည်းများကို ဦး စားပေးသင့်သည်။ အဆုံးမဲ့စာမျက်နှာများ၊ စာသားကြီးများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအမြင်အာရုံပါသောအကြောင်းအရာများသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များအတွက်စုစုပေါင်းအလှည့်အပြောင်းဖြစ်သည်။
၃။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်မလိုအပ်သော Pop-ups နှင့်ဗီဒီယိုများကိုဖယ်ရှားပါ
ဒီလိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ pop-ups တွေနဲ့ဗွီဒီယိုကြော်ငြာတွေကမင်းရဲ့ web ဒီဇိုင်းကိုပျက်စီးစေပြီးပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုလည်းပါဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းသည်မည်မျှပင်ကောင်းမွန်ပါစေ pop-ups များစွာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် UX နှင့်သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေပြီးပြောင်းလဲမှုနှုန်းကျဆင်းစေသည်။
ခဲများထုတ်လုပ်ခြင်းထက်သင့်အနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောခုန်ထွက်နှုန်းနှင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ တကယ်တော့, ကကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုအရသိရသည် သာ။ ကောင်း၏ကြော်ငြာများအတွက်ညွန့်ပေါင်း၊ မုန်းတီးမှုအများဆုံးမိုဘိုင်းကြော်ငြာအမျိုးအစားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာ ၃၀% ကျော်သောမိုဘိုင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ
Checkout စွန့်ခွာအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်မှာကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာ၏မကောင်းသောဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအမှန်တကယ်မ ၀ ယ်ဘဲစျေး ၀ ယ်လှည်းပေါ်တွင်ထားခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည် နှိပ်၍ ရသောညာဘက်ခလုတ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါသို့မဟုတ်စာမျက်နှာသွားလာရန်ခက်ခဲလွန်းလှသည်။
ထို့ကြောင့်ငွေရှင်းကောင်တာစာကိုသန့်ရှင်းပြီးအနည်းငယ်မျှသာထားသင့်သည်။ နေရာလွတ်များနှင့်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိအဆင့်များကိုဖြန့်ခြင်းသည်ကူညီလိမ့်မည်။ ခလုတ်များသည်ဖောက်သည်အားငွေရှင်းကောင်တာလုပ်ငန်းစဉ်၏မှန်ကန်သောအစီအစဉ်အတိုင်းလည်ပတ်သင့်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သည်သင် visitors ည့်သည်များကိုအမှန်တကယ်ဖောက်သည်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပိုမိုချောမွေ့သောငွေပေးငွေယူမှုနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်အားလုံးသည်သူတို့၏အမိန့်များကိုပေးဆောင်ရန် PayPal ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါနှင့်။
e-commerce လုပ်ငန်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရန်အမြဲစဉ်းစားသင့်သည်။ ခရက်ဒစ်ကတ်များသို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေပေးချေမှုများ မှလွဲ၍ သင် Apple Pay ထပ်ထည့်ချင်သည်၊ Google သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်းများသို့ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်ထွက်လာနေပြီး e-commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကကြိုတင်မြင်။ အားသာချက်ယူသင့်သည်။
မိုဘိုင်းလ်လိုင်းတွင်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ လိုအပ်သမျှအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် optimization ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျစီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းဝဘ်ဆိုက်ဖြေရှင်းမှုမှတစ်ဆင့်သင့်ဖောက်သည်များအားပျော်ရွှင်စေပါ။
ဒါပေမယ့်အရာရာကိုလုပ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလည်းရှိတယ်။ သင်ကပညာရှင်များထံမှအကူအညီရယူနိုင်သည်။ Mobile optimization သည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော် Derry web design ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏လုပ်ငန်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်အချိန်ကိုချွေတာနိုင်သည်။
Tags: ဗွီဒီယိုအလိုအလျောက်ကစားခြင်းပိုကောင်းတဲ့ကြော်ငြာတွေအတွက်ညွန့်ပေါင်းနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကြော်ငြာမိုဘိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမိုဘိုင်း optimizationမိုဘိုင်းပေါ်လာမိုဘိုင်းမြန်နှုန်းမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းချောမွေ့စွာကုန်ပစ္စည်း